Opinions & Discussion » သမ်းဂေါင်ထပ် ည့ဉ်မနက် NLD အတွက်	14
ဦးကျောက်ခဲ says: ကြောင်ဇုတ် ကြောင်ဏှာကို ကြောင်ရာသွင်းပြီးမန့်ရရင်…
ကံမကောင်းရင် တပ်ချုပ် မအလ တောင် သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်… ဒါဗြဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: . ကိုရွှေကြောင်ကြောင်
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖွဘုတ်မှာ ကယွဲစီနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာလေး စာလုံးအထားအသိုပြင်ထားတာပါ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ လူထုကြိုက်နှစ် သက်ရာခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိစေမဲ့ အဓိက အပြောင်းအလဲတွေကို စစ်တပ်က ဟန့်တားလိုက်တဲ့အတွက် အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က ဒီမိုကရက်အမတ် Joe Crowley နဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ် Steve Chabot တို့က ရှုတ်ချလိုက်ကြပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: ဒီလို သာ စစ်တပ် ရဲ့ ဗိုလ်ကျတာ တွေ ဆက်ရှိနေတာ ပေါ်လွင်လာရင်မြန်မာပြည် ထဲ ဝင်လာမဲ့ ခြေလှမ်း တွေ ရပ်သွားမယ်။
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်ပြောပြီးပြီ
ထမီထုတ် ကူဆွဲပေးရုံနဲ့တော့ အမတ် တက်မလုပ်ပါနဲ့ ၊ အခုထိ ရေရာသေချာတဲ့
ဟိုဘက်ကလည်း ညစ်နည်းပေါင်းစုံ လာဦးမယ် ၊ မဲနိူင်လောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ ရှိသေးတယ် ၊
သူတို့နဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ ၊ သူနိူင်လောက်တဲ့နယ် ကိုယ်မဝင်နဲ့ ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ သူတို့မဲ ဟာ ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်လာမှာ ၊
ပြီးတော့ နယ်တွေမှာ ဒေသခံကြိုက်သူကိုပယ်ပြီး ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ အပေါ်ကချပေးတာမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရပါမယ် ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၅ ဟာ ၂၀၁၂ ထက် နည်းနည်းသာလာမယ်ဆိုရင် ၂၀၂၀ဟာ ပို အမြင်တင့်လာပါလိမ့်မယ် ၊
kai says: ဒေါ်စုဆက်ရှိနေရင်.. အားကိုးရတဲ့အမတ်တွေအဖြစ်.. နိုင်ငံခြားကနေသင်ယူလို့ရပါတယ်..။
အဲဒီမှာလည်း.. မသိမတတ်တာတွေအတွက်.. နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လွှတ်(ရ)ပါလိမ့်မယ်..။ နောင်၁၀နှစ်မြန်မာပြည်ကြိး မျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ…။
Ma Ma says: လူပုံအလယ်မှာတင့်တယ်ပြီး တော်တည့်မှန်ကန်တာကို ရနိုင်ပါလျှက်နဲ့ မယူပြီးဆိုရင်…..
ရှေးကုသိုလ်နည်းခဲ့လို့ ၀တ်နိုင်စားနိုင်ပါလျှက်နဲ့ မ၀တ်မစားပဲ ခပ်နွမ်းနွမ်းနေတာ ကပ်စေးနဲ့ခြစ်ကုတ်ပြီး မစားမသောက်ပဲ နေသလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုယ်အားကိုးနေသူ က မပါတော့ ဘူးလို့ လုပ်မှာကို ပိုစိုးရိမ်ပါတယ်
surmi says: ကြောင်နာကြီးကို အသေသတ် !!!
Alinsett @ Maung Thura says: မဲပေးခွင့်ရှိသူ စာရင်းတွေ မှားနေတာကတော့ အင်မတိအင်မတန်ကို အရုပ်ဆိုး(အယုတ်ဆိုး)လွန်းပါတယ်
kai says: မဲကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်…။